ရေနွေးငွေ့အပေါ်အခမဲ့အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းတစ်ခုညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုက်တစ်ခုထူးဆန်းနာမကိုအမှီဖြစ်စေခြင်းငှါ,ဒါပေမယ့်ဒီမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ပုံမှန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်း 2.0,သင်နောက်ဆုံးတော့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အစားကစားခြင်းကိုစတင်ရန်လိုအပ်အတိအကျအရာကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားကမ္ဘာတွင်အသစ်တခုအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပိုင်ဆိုင်မည့်မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆိုကစားနိုင်သောခေတ်မီဂိမ်းတစ်ခုတက်ရန်စုဆောင်းမှုရှိသည်။, ဤဆိုဒ်ပေါ်ရှိဂိမ်းအားလုံးသည်သင့်အားပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဂိမ်းကစားခြင်းကိုပေးမည့်လိင်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်အတွက်နည်းပညာအသစ်၊သင်ကစားရုံတွင်ကစားဖူးသည့်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်လည်းဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းများဖြင့်သင်၏စွန့်စားမှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏စာကြည့်တိုက်တွင်အမျိုးအစားအားလုံးနှင့်အမျိုးအစားများမှဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းရန်သေချာစေပါ။ သင်တွေ့ကြုံခံစားချင်သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ,သငျသညျအကြှနျုပျတို့ဖန်တီးဒီအံ့သြစရာကမ်ဘာပျေါတှငျကခံစားနိုင်ပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်တံ့သောနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ပင်ဂိမ်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင်သည်အခြားကစားသမားတွေအများကြီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါငျးတို့သအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များအကြောင်းပါ။ ငါသည်ဤအင်္ဂါရပ်အားလုံးစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကောင်းလွန်းကောင်းသောပုံပေါ်ကြောင်းငါသိ၏,ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးစစ်မှန်တဲ့နှင့်အရာခပ်သိမ်းကဒီမှာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မဆိုငွေပေးချေမှုများအတွက်မမေးကြဘူးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုလှူဒါန်းရန်သင့်အားမလိုအပ်ပါဘူး။, ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,အခြားညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်များအပေါ်အဆုံးစွန်သောခွေးလှေးငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ဤဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုကြကုန်အံ့မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်သင့်အားမမေးကြဘူးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကညစ်ညမ်းမှကြွလာသောအခါစုစုပေါင်းအမည်မဖော်အတွက်ယုံကြည်ပါတယ်,သင်တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့စေခြင်းငှါအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ရှာဖွေစူးစမ်းခံစားနိုင်အောင်.
ဟုတ်တယ်၊မှန်တာကိုဖတ်ပြီးပြီ။ လက်ရှိအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းကစားခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကမ်းလှမ်းရန်ဤမျှလောက်နှင့်အတူလာမယ့်။ ဒါပေမယ့် ၀ က်ဘ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးသည်လည်းကစားရကျိုးနပ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဖန်ဆင်းမတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတိုင်းတစ်ခုတည်းဂိမ်းစမ်းသပ်ခဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ပရီမီယံစံချိန်စံညွှန်းမှာလာအခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုစုဆောင်းမှုဖန်တီးခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,ငါတို့သည်သင်တို့ခဲယဉ်းသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောရအံ့သောငှါမဆိုကီနှင့်စိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖန်တီးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်လာသည့်မည်သည့်ကစားသမားအတွက်မဆိုဂိမ်းများရှိသည်။ ဖြောင့်ယောက်ျားများအတွက်များစွာသောဂိမ်းများအပြင်,ငါတို့စုံတွဲများအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများအတွက်လိင်ဂိမ်းများရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ဆိုက်ရဲ့လိင်တူချစ်သူ၊လိင်တူချစ်သူနဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေပြီးလူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့လိင်မှုကိစ္စရဲ့ရှုထောင့်အားလုံးကိုစူးစမ်းလေ့လာစေလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ဂိမ်းအမျိုးအစားမှကြွလာသောအခါ,ငါတို့သည်လည်းမတူကွဲပြားမှုကိုဆက်ကပ်။ အချို့သောဂိမ်းများသည်လိင်ကွဲပြားမှုအဖြစ်လာပြီးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလုံးသည်အမာခံကစားသမားများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤဂိမ်းများတွင်ဂိမ်းကိုသင်ခံစားနိုင်သည့်စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်မီနူးများသည်သင့်အားဇာတ်ကောင်များနှင့်ပတ်သက်၍များစွာသောအရာများကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ ကာတွန်းများ၊ကာတွန်းများ၊သို့မဟုတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများမှဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးကိုသင် ၀ င်ရောက်စေမည့်ရုပ်ပြောင်စုဆောင်းမှုတွင်ဂိမ်းများရှိသည်။ တဖန်သင်တို့ဇာတ်ကောင်ကိုကျင့်ရရှေ့တော်၌ထိုအပြီးသတ်ရန်ရှိသည်ဖြေရှင်းရေးတွေအများကြီးနှင့်အတူရိုင်းဂိမ်းစွန့်စားအတူပါလာပါလိမ့်မယ်။
ရေနွေးငွေ့အပေါ်အခမဲ့အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုသင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ်ရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျဂိမ်းပေါ်တွင်သင်၏အကြံအစည်ဝေမျှနှင့်သင်ရုံပျော်မွေ့င့်ကြှနျတျောတို့ဆှေးနှေးနိုငျရှိရာတစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းအောက်မှာမှတ်ချက်အပိုင်းများရှိသည်။ သင်သည်မည်သည့်ညစ်ပတ်ခေါင်းစဉ်အပေါ်လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးရန်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ပြီးသားဖြစ်ပွားနေသောချည်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ဖိုရမ်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ပရိသတ်များအတော်များများပလက်ဖောင်းပေါ်မှာချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းတင်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာရပ်ခံပါပြီ။ ဒါမှလည်းစကားပြောခန်းကိုအမည်မဖော်ချင်သလိုနည်းနည်းလေးလှနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေ! ဖမ်းယူနားဆင်နေပါ!